Resaka fitantanana tsy mazava ao amin’ny Unesco Tsy mitombina, hoy ny sekretera jeneraly
BNGRC Atomboka dieny izao ny fiatrehana ny fahavaratra
Raha ny tombana nomen` ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia vinavinaina ho telo hatramin` ny dimy eo ho eo ny rivo-dizo hananontanona ny sisin-dranomasin`i Madagasikara mandritra ity fotoam-pahavaratra ity.
Talen’ny fitarainana - Prezidansa Niaiky ny ezaka vitan’ny FITRAMA
Tonga nitsidika sy nijery ny foiben’ny orinasa Mpitsabo Malagasy FITRAMA etsy amin’ny 67 ha ny Sabotsy lasa teo ny talen’ny fitarainana eo anivon’ny fiadidian’ny Repoblika Rakotomanana Richardson.
Fanolanana zaza teny Ivato Mpiambina telolahy nidoboka am-ponja
Zazavavikely roa samy dimy taona, zanaka olona mirahavavy no samy niharan’ny fanolanana ny alin’ny alarobia, 07 oktobra teo teny Ivato.
Fampihorohoroana anaty aterineto Miantso fijoroana vavolombelona ny rafitra Omena
Ao anatin’ny fampahafantarana ny tetikasa “cyber-empathie” dia manatontosa fanentanana hiadiana amin’ny fampihorohoroana mitranga anaty aterineto ankehitriny na “cyber-harcèlement” ny avy eo anivon’ny rafitra antsoina hoe Omena.
Ho tapitra ihany koa ny oktobra Ahoana ny fidinan’ny vidin-tsolika ?
Dimy volana lasa izay ny 28 mey nilazan’ny Praiminisitra, fa hatramin’ny volana septambra na oktobra eo no hahafaha-manefa ny 170 miliara ariary, trosan’ny orinasa mpaninjara solika amin’ny Fanjakana.
Feno 45 taona ny JIRAMA Hisy ny lalao goavana hahazoana 1 tapitrisa Ar
Feno 45 taona katroka tamin’ny sabotsy 17 oktobra teo ny naha JIRAMA ny JIRAMA. Nosokafana tamim-pomba ofisialy, tamin’io andro io, ary haharitra herin-taona ny fankalazana manerana ireo ivon-toerana 35-n’ny JIRAMA eto Madagasikara.
Tapany atsimon’ny nosy 55 ka hatramin’ny 60km/h ny tafio-drivotra
Hahatratra 55 ka hatramin’ny 60km/h ny tafio-drivotra amin’iny tapany atsimon’ny nosy iny, ny marimarina kokoa eo anelanelan’i Toliara sy Taolagnaro,
Tonga nanotrona ny fankalazana ny andro iraisampirenena ho an’ny Onjampeo tetsy amin’ny Radiom-pirenena etsy Anosy
omaly ny solontena avy eo anivon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fanabeazana sy ny kolontsaina eto amintsika na Unesco notarihin’ny sekretera jeneraly misahana izany eto Madagasikara, Manda Ravelojaona. Ny hafatra, hoy izy, dia araka ny lohahevitra hoe « Samihafa, samy onjampeo, iray ihany isika. ». Izany hoe ny antom-pisian’ny onjampeo dia ahafahana mitondra lohahevitra marolafy ho an’ny fampandrosoana. Samy manana ny firehan-keviny sy hevitra tiany hampitaina kanefa dia isika rehetra samy mahatsapa izay maha iray izay. Nasongadina tamin’ny radio miara-manonja niarahan’ireo radio samihafa eto amin’ny firenena izany anio (TTF : Omaly), hoy hatrany izy. Mikasika ny vaovao izay milaza fa misy fitantanana tsy mazava sy tsindry ara-politika moa eo anivon’ny Unesco eto Madagasikara dia nanazava ity SG ity fa tsy mitombona izany satria eto Madagasikara dia misy ny atao hoe « antenne Unesco » sy « Comnat Unesco ». Tao anatin’ny fitantanako dia nifanarahana fa mba hisian’ny mangarahara dia ao amin’ny kaontin’ny Comnat no apetraka ireo vola ho an’ny mpiara-miombon’antoka. Izany hoe fantatra mazava izay vola miditra ao ary fantatra ihany koa ny ampiasan’ilay mandray azy. Manara-maso izany no anjaranay avy eo. Mpampiditra sy mpamoaka ary mpanara-maso ireo vola izahay fa tsy mpitantam-bola, hoy hatrany izy. Mikasika ilay resaka antoko politika dia mametraka ny maha tekinisianina ny tenako mialohan’ny zavatra rehetra aho, hoy izy, ary tsy fombako izany manao tsindry ara-politika izany.